Udokotela wezifo zamehlo ukulondoloza impilo amehlo akho
Amehlo - esibukweni umphefumulo, ngakho uma kukhona lapho umuntu enezinkinga ezihambisana nombono, kubalulekile ukuxhumana nodokotela. The main isikhalazo - ubuhlungu iso enethiwekhi, ububomvu, isithombe buthuntu futhi esilufifi. Kulezi zimo, sidinga ochwepheshe ongakusiza ababephethwe izifo iso - lokhu kudokotela wamehlo okunethiwethi futhi ophthalmologist. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi lokhu into efanayo. Nokho, lokho akulona iqiniso.
Udokotela wezifo zamehlo futhi iso udokotela: uyini umehluko
Esikhungweni impilo noma isikhungo sezokwelapha kungenzeka ukuthi ahlinzekwa aphoyintimenti ukuya kudokotela wamehlo okunethiwethi noma ophthalmologist. Ukuze sikhethe kahle, kungase kudingeke uqonde umehluko phakathi kwalezi abelaphi ezimbili.
Udokotela wamehlo, abasebenza kakhulu ukulungiswa umbono. Izisebenzi Uchwepheshe ubophekile ukuba wamukele degree yezokwelapha futhi sidlule ukuqeqeshwa professional udokotela. Bamehlo kungaba nokwelapha lesi sifo, ukulawula izifo eziningana neziyaluyalu kohlelo ezibukwayo. Udokotela wamehlo, njengoba kudokotela wezifo zamehlo, ukuthola futhi zibeka wena imithi uma une:
Udokotela sizohlola ikhono lesiguli ukunqophisa emqondweni, hlola ukubambisana, ukuphelela umbono kanye nekhono ukubona imibala.
Ngubani kudokotela wezifo zamehlo? Lena udokotela onikeza ukunakekelwa ngezokwelashwa kanye kuhlinzwa izifo umbono, kodwa futhi inikeza nokuvinjelwa kwezifo futhi ukulimala iso. Udokotela wezifo zamehlo hhayi kuphela iziqu, kodwa futhi abaqeqeshiwe esikoleni sobudokotela futhi internship. Futhi, onguchwepheshe kufanele abaqeqeshiwe ekwelapheni uhlelo ocular. Udokotela is bafanelekela ukunikeza amasevisi ukuba zonke izinhlobo ukunakekelwa iso nokunakekela kuhlinzwa. Kudokotela wezifo zamehlo lungacacisa ukuphazamiseka visual, okuyinto zibangelwa ngezinye izifo ezifana nesifo sikashukela noma ukunyuka Oncology.
Udokotela wezifo zamehlo. Lapho ukubiza
Uzodinga uthintane kudokotela wezifo zamehlo uma uba izifo elandelayo:
Conjunctivitis - libhekene izinhlungu abukhali, ukwesaba ukukhanya, ukuvuvukala Isivalo, izinyembezi, njalo ubovu osenyameni evela amehlo.
Blepharitis - ifomu elula emaphethelweni Isivalo embozwe izikali ezimhlophe futhi abe uphawu. Esidalwa yizilonda emathunjini sibe - kuhlanganisa ubovu amabhokisi aseleyo uma ukhipha izilonda. Uma amajwabu amehlo uqweqwe ne imiphetho nanamafutha touch - lokhu blepharitis meybomievy.
Cataract - lokhu eliqinisa ilensi cataract isiguli sibe ukulahlekelwa futhi angaboni kahle. Udokotela iSifo ke esingokwemvelo noma bathenga, okuqhubekayo noma umile.
I-glaucoma - lapho ukugula wezwa ubuhlungu emehlweni ikhanda, ukulahlekelwa esinqunyiwe noma ephelele Embonweni, ichichima cornea, abafundi uvuleke, kukhuphuke ingcindezi intraocular.
I ophthalmologist bazokwazi ukuhlonza ezinye izifo ezifana keratitis, scleritis, futhi ukuqhuba ucwaningo oludingekile, ezifana ultrasound, gonioscopy noma transillumination.
Ngokuba nokuvimbela izifo, ochwepheshe ukweluleka ukwenza umzimba for amehlo, ukuba bangalisebenzisi kabi izibuko, sidle ukudla okunempilo. Kudliwa calcium eyanele, isibindi, yenkomo noma ama-cod, nokunye okufana nokolweni.
Tailor - ukwakheka umsebenzi indoda
Uba kanjani iphoyisa eRussia?
Abaqeqeshi: izici umsebenzi, incazelo umsebenzi
Umcwaningi Junior: imisebenzi umsebenzi, iziqu kanye nezici
Ukwenza isifinyezo: ekufezeni iphupho
Kanjani ukuze ushintshe iphasiwedi yakho ku "Maynkraft" eziqinile
Ukuhlaziywa Literary: "Inkululeko ehlane umhlwanyeli" Pushkin. I iziphakamiso main
Ukulungisa ibhethri - lena ukulawuleka
Isaladi okumnandi "UMargarita"
Ukuhambelana: Ihhashi-indoda ihhashi-nowesifazane. Yiba ke umfelandawonye?
Khetha enhle imbali cross Stitch ishadi